Football Khabar » पहिलो हाफमै रियलको पोस्टमा एथ्लेटिकोले हान्यो ५ गोल !
पहिलो हाफमै रियलको पोस्टमा एथ्लेटिकोले हान्यो ५ गोल !
प्रि–सिजनअन्तर्गत अहिले इन्टरनेसनल च्याम्पियन्स कप फुटबलमा स्पेनका दुई ठूला क्लब रियल मड्रिड र एथ्लेटिको मड्रिडबीच मड्रिड डर्बी हुँदैछ । अमेरिकामा जारी खेलको पहिलो हाफमा एथ्लेटिकोले रियलविरुद्ध ५–० को फराकिलो अग्रता लिएको छ ।
खेलको सुरुआतबाटै हाबी भएको एथ्लेटिकोका लागि डिएगो कोस्टाले २ गोल गरे भने नयाँ खेलाडी जोआओ फेलिक्स पनि गोल गर्न सफल भए । एथ्लेटिकोका लागि खेलको पहिलो मिनेटमै डिएगो कोस्टाले गोल गरेका थिए ।
त्यसपछि खेलको आठौं मिनेटमा फेलिक्सले बक्स भित्रबाट सहजै गोल गरेका थिए । त्यसपछि १९औं मिनेटमा अल्भारो मोराटाको ठाउँमा मैदान छिरेका एन्जल कोरेराले गोल गरेर खेल ३–० बनाए ।
एथ्लेटिको त्यत्तिमै रोकिएन । खेलको २८औं मिनेटमा कोस्टाले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे । फेरि पहिलो हाफमो अन्तिम समयमा कोस्टाले नै पेनाल्टीबाट गोल गरेपछि आफ्नो ह्याट्रिक गोल पूरा गर्दा एथ्लेटिकोले पहिलो हाफमा ५–० को अग्रता लियो ।
रियल पहिलो रोजाइका खेलाडीका साथ खेलिरहेको छ । पहिलो हाफमा रियलका नयाँ फरवार्ड लुका जोभिक चोट बोक्दै मैदान छाडेपछि उनको स्थानमा करिम बेन्जेमा मैदान छिरेका थिए ।
प्रकाशित मिति ११ श्रावण २०७६, शनिबार ००:५६